ကောငျးအောငျနတေဲ့ကွားက မကောငျးမွငျခံရတဲ့အခါ – Shinyoon
ကြှနျမ ကောငျးအောငျနတေဲ့ကွားက မကောငျးမွငျခံရတဲ့အခါ အရငျလို ကပျကပျလနျရနျတှမေ့နတေော့ဘူး ငါတော့ ဝဋျကွှေးတဈခု ဆပျပွီးပွီလို့ တဖွေးဖွေး ဖွသေိမျ့တတျလာခဲ့ပွီ .. အရငျကစိတျနဲ့ဆိုရငျတော့ ကိုယျကောငျးအောငျနတေဲ့အကွောငျးကို ဖွရှေငျးခငျြ ဖွရှေငျးနမေိမှာပါ …
ဒါပမေယျ့ နရောတကာ လိုကျပွီးဖွရှေငျးခငျြနလေို့မရသလို လူတှကေ ကိုယျကောငျးနတောကို လကျခံခငျြကွမှာလဲ မဟုတျပါဘူး … တခြို့က ကိုယျအဆငျပွနေတောထကျ ကိုယျဘယျအခြိနျ အဆငျမပွဖွေဈမလဲဆိုတဲ့ မကျြလုံးတှနေဲ့ ကွညျ့နတေတျတာလေ …
တဈခါတဈလကေတြော့ ဖွရှေငျးခငျြတဲ့စိတျကို ထိနျးရမယျ ငါမှနျနတောပဲဆိုပမေယျ့လဲ ကိုယျအမှနျကနေ ကိုယျ့အလှနျတှေ ဖွဈသှားတတျတာကို သိထားဖို့လိုတယျ လူကွီးနဲ့လူငယျ ဇာတျလမျးတှမှော အမြားနဲ့တဈယောကျ ဇာတျလမျးတှမှော ကိုယျ့အလှနျတှေ ဖွဈမသှားဖို့လိုတယျ
မှနျမှနျမှားမှား ခေါငျးငုံ့ခံနရေမယျလို့ ပွောတာမဟုတျဘူး … လူကွီးနဲ့လူငယျဖွဈလာတဲ့အခါ ကိုယျမှနျနပေမေယျ့ ကိုယျ့အလှနျဖွဈသှားဖို့ မြားတယျ အမြားနဲ့တဈယောကျဖွဈတိုငျး ကွောကျလို့ ပါးစပျပိတျနခေိုငျးတာ မဟုတျဘူးနျော တဈခါတဈလေ အခြိနျကောငျးဆိုတာ ရှိတတျတယျလေ စိတျရှညျတတျဖို့နဲ့ အခွအေနကွေညျ့တတျဖို့တော့ လိုမယျ
ကိုယျကောငျးအောငျနပေမေယျ့လဲ မကောငျးမွငျခံရတဲ့အခါ အရငျလို ကပျကပျလနျ ရနျတှမေ့နတေော့ဘူး ကိုယျဆပျရမယျ့ ဝဋျကွှေးတဈခုတော့ ဆပျပွီးပွီလို့ဖွသေိမျ့တတျလာပွီ ….
ကျွန်မ ကောင်းအောင်နေတဲ့ကြားက မကောင်းမြင်ခံရတဲ့အခါ အရင်လို ကပ်ကပ်လန်ရန်တွေ့မနေတော့ဘူး ငါတော့ ၀ဋ်ကြွေးတစ်ခု ဆပ်ပြီးပြီလို့ တဖြေးဖြေး ဖြေသိမ့်တတ်လာခဲ့ပြီ .. အရင်ကစိတ်နဲ့ဆိုရင်တော့ ကိုယ်ကောင်းအောင်နေတဲ့အကြောင်းကို ဖြေရှင်းချင် ဖြေရှင်းနေမိမှာပါ …
ဒါပေမယ့် နေရာတကာ လိုက်ပြီးဖြေရှင်းချင်နေလို့မရသလို လူတွေက ကိုယ်ကောင်းနေတာကို လက်ခံချင်ကြမှာလဲ မဟုတ်ပါဘူး … တချို့က ကိုယ်အဆင်ပြေနေတာထက် ကိုယ်ဘယ်အချိန် အဆင်မပြေဖြစ်မလဲဆိုတဲ့ မျက်လုံးတွေနဲ့ ကြည့်နေတတ်တာလေ …
တစ်ခါတစ်လေကျတော့ ဖြေရှင်းချင်တဲ့စိတ်ကို ထိန်းရမယ် ငါမှန်နေတာပဲဆိုပေမယ့်လဲ ကိုယ်အမှန်ကနေ ကိုယ့်အလွန်တွေ ဖြစ်သွားတတ်တာကို သိထားဖို့လိုတယ် လူကြီးနဲ့လူငယ် ဇာတ်လမ်းတွေမှာ အများနဲ့တစ်ယောက် ဇာတ်လမ်းတွေမှာ ကိုယ့်အလွန်တွေ ဖြစ်မသွားဖို့လိုတယ်
မှန်မှန်မှားမှား ခေါင်းငုံ့ခံနေရမယ်လို့ ပြောတာမဟုတ်ဘူး … လူကြီးနဲ့လူငယ်ဖြစ်လာတဲ့အခါ ကိုယ်မှန်နေပေမယ့် ကိုယ့်အလွန်ဖြစ်သွားဖို့ များတယ် အများနဲ့တစ်ယောက်ဖြစ်တိုင်း ကြောက်လို့ ပါးစပ်ပိတ်နေခိုင်းတာ မဟုတ်ဘူးနော် တစ်ခါတစ်လေ အချိန်ကောင်းဆိုတာ ရှိတတ်တယ်လေ စိတ်ရှည်တတ်ဖို့နဲ့ အခြေအနေကြည့်တတ်ဖို့တော့ လိုမယ်
ကိုယ်ကောင်းအောင်နေပေမယ့်လဲ မကောင်းမြင်ခံရတဲ့အခါ အရင်လို ကပ်ကပ်လန် ရန်တွေ့မနေတော့ဘူး ကိုယ်ဆပ်ရမယ့် ၀ဋ်ကြွေးတစ်ခုတော့ ဆပ်ပြီးပြီလို့ ဖြေသိမ့်တတ်လာပြီ ….
ကြှနျမမလှဘူးတဲ့ အမှနျပဲ စိတျဓာတျလေးတော့ လှအောငျထားတယျ